Tsvaga masikisi mashanu makuru ekugadzirwa kweganda | Bezzia
Susana Garcia | 01/05/2021 20:00 | Runako, Zvigadzirwa zverunako
Kana isu tikataura nezve echisikigo uye epamba masiki ekuchengeta vhudzi, ikozvino ndiyo nguva yekuchinja kwemasks yekuvandudza ganda rechiso kana muviri ino chitubu. Izvi masiki anogona kuiswa chero kwatinoda ivo vakanaka kwazvo pakuchengetwa kweganda. Ngatione maitiro ekugadzira zvimwe zvinonyanya kufadza kuve neganda rakakwana ratinogona kupfeka nehembe dzemuchirimo.
ari masiki ekugadzirira anogona kugadzirwa nemhando dzose dzezvigadzirwas. Tinogona kusimbisa ganda munzira dzakawanda, tichishandisa izvo zvakasikwa zvinotipa isu kugadzirisa muviri wedu. Aya marudzi emasikisi ari nyore kugadzira uye anoshanda chaizvo nekuti akagadzirwa pamba nezvinhu zvishoma uye anovandudza zvakanyanya kumeso nehunhu hwayo.
1 Mask yekumutsiridza ganda neoatmeal
2 Masiki eganda rinotapira nealoe vera
3 Astringent mask ine ndimu
4 Mask yeganda rakaoma nemafuta emuorivhi
5 Kubvisa maski neshuga
Mask yekumutsiridza ganda neoatmeal
Oatmeal chinhu chinoshandira zvinhu zvakawanda. Haisi chete chikafu chinopa hutano chinoshandiswa mumarepeti mazhinji, asi zvakare zvinopa zvinhu zvikuru kuganda. Iyo oatmeal ine rimwe simba rekuwedzeredza rinovandudza ganda nekuti panguva imwechete inoitarisira uye inobatsira kuchengetedza mwando mairi. Iwe unogona kushandisa humwe huchi kuisanganisa uye uwane akanakisa maitiro. Uchi hune hunyanzvi hwekudiridza ganda uyezve hunorwisa matambudziko akaita seacne. Izvo zviviri zviri nyore kushandisa zvishandiso zvinowanikwa zviri nyore. Chizora nekwakapusa kwenya paganda uye woenda kwemaminitsi makumi maviri kuti ubvise gare gare.
Masiki eganda rinotapira nealoe vera
Aloe vera ndechimwe chezvinhu zvakasikwa iwe zvaunoshandisa zvakanyanya kana uchida kuchengetedza ganda rako, chero chingave. Inokurudzirwa kwazvo kune rakanyanya ganda nekuti rinobatsira nyorovesa, chengetedza ganda rakatsetseka uye rakachena, zvese muchinhu chimwe chete. Inodzikamisa ganda nekutsvuka uye unogona kuishandisa sekupedza zuva kuchengetedza ganda rako mushure mekuratidzwa nezuva. Iyo yakasarudzika aloe vera inowanikwa kubva muchirimwa, kucheka mashizha nekubvisa gel ravanaro mukati, asi isu tinogona kuzvitenga zviri nyore muzvitoro zvemishonga zvekushandisa paganda. Iyo mask inonyevenutsa ganda dzvuku uye kuridiridza.
Astringent mask ine ndimu
Ganda rine mafuta rinenge riine iyo dambudziko rekuwandisa sebum iyo inoguma inogadzira mamwe marara mazhinji. Imwe yematanho ekutanga atinofanira kuita kuedza kudzora iyo sebum iyo inogadzirwa paganda. Ndicho chikonzero nei muto wemononi uchi wakakwana. Inogona kusanganiswa neuchi hushoma kana jena rezai, sezvo ivo vachinyorovesa asi vasingawedzere mafuta paganda. Ndimu inogona kukanganisa ganda kana tikasangana nezuva mushure, saka zvirinani kushandisa chifukidzo ichi usiku.
Mask yeganda rakaoma nemafuta emuorivhi
Mafuta omuorivhi anogara ari mukicheni medu uye zvakare chinhu chinovaka muviri zvikuru iyo inogona kushandiswa mumeso echiso. Inonyorova zvakanyanya uye haifanire kushandiswa pane ganda rine mafuta, asi rakanakira avo vanooma. Kana ganda rako rakaoma unogona kushandisa mashoma emaspuni emafuta emuorivhi nezai chena kusanganisa. Iwe unowana yakawanda yakanyanya hydrated uye inopenya ganda nekushandisa kwemasiki iyi.
Kubvisa maski neshuga
Shuga, mukuwedzera pakushandiswa madhiri, kukwesha kukuru. Kana iwe ukasanganisa zvishoma nepuniki yemafuta emuorivhi unenge uine exfoliator huru yeganda rako. Unogona kuishandisa chete pamuromo kana pachiso. Massage uye gadzira kumeso kwako nguva dzose mushure meizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » 5 mamaki ekugadzira kuratidza ganda rako muchirimo